ဘုမသိ ဘမသိဘဲနဲ့ အာမချောင်ကြပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့အစ်မ…. – Cele Oscar
ဘုမသိ ဘမသိဘဲနဲ့ အာမချောင်ကြပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောလာတဲ့ ပိုင်တံခွန် ရဲ့အစ်မ….
ဇှနျလ (၃၀)ရကျ နမှေ့ာ တော့ မွနျမာ တဈနိုငျငံလုံးရှိ အကဉျြးထောငျ တှကေနေ အကဉျြးသား ( ၂၀၀၀ ) ကြျောခနျ့ကို လှတျပေးမှာ ဖွဈကွောငျး သတငျးတှထှေကျပျေါနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဖမျးဆီးခံ ထားရတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့ မိသားစုဝငျတှကေ ထောငျပေါကျဝ အရှမှေ့ာ မနကျကတညျး က သှားစောငျ့ နကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ညနေ ပိုငျးမှာတော့ မွဈကွီးနား ၊ ထားဝယျ ၊ လားရှိုး တို့မှာရှိတဲ့ အကဉျြးထောငျ တှကေနေ ဖမျးဆီးခံ ပွညျသူတဈခြို့ လှတျမွောကျ လာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ ။
လှတျမွောကျ လာမယျ့ ပွညျသူတှထေဲမှာ ဖမျးဆီး ထိနျးသိမျးခံထား ရတဲ့ အနုပညာရှငျတှလေညျး ပါဝငျ လာမယျဆိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြနဲ့ အားလုံးက စောငျ့စားနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လူမှု ကှနျယကျစာမကျြနှာ တှထေကျမှာတော့ သရုပျဆောငျ ပိုငျတံခှနျ လှတျမွောကျလာပွီ ဆိုပွီး သတငျး အမှားတှေ ထှကျပျေါခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီသတငျး နဲ့ ပတျသကျပွီး ပိုငျတံခှနျ ရဲ့ မိသားစုဝငျတဈဦးက ပွနျဖွရှေငျးထားတာလ ညျး တှရေ့ပါတယျ။
ပိုငျတံခှနျ ရဲ့ မိသားစုဝငျတဈဦး က “အပိုငျကွီးကို ရေးတငျ နကွေတာ မကျြစိ နဲ့ တပျအပျ မွငျခဲ့ကွလို့လား? မိသားစု ထကျတောငျ ပိုသိနကွေတာ နျော စိတျတိုနရေတဲ့အထဲ..ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အာမခြောငျကွပါနဲ့ တောငျးပနျပါတယျ” ဆိုပွီး သတငျးအမှားတှေ မဖွနျ့ကွဖို့ ပွောထား တာ ဖွဈပါတယျ ။အဈမဖွဈသူရဲ့ရေးသားပွောပွခကျြအရ သရုပျဆောငျ ပိုငျတံခှနျက အခုခြိနျအထိ ပွနျလညျ လှတျမွောကျလာခွငျး မရှိ သေးတာကွောငျ့ မိသား စုဝငျတှကေ ဆကျလကျစောငျ့မြှျောနရေဆဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှနေဲ့ ပရိသတျတှကေလညျး ပိုငျတံခှနျအမွနျဆုံး လှတျမွောကျစေ ဖို့အတှကျ ဆုတောငျးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
Source-May Chit Thway
ဇွန်လ (၃၀)ရက် နေ့မှာ တော့ မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အကျဉ်းထောင် တွေကနေ အကျဉ်းသား ( ၂၀၀၀ ) ကျော်ခန့်ကို လွှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖမ်းဆီးခံ ထားရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ထောင်ပေါက်ဝ အရှေ့မှာ မနက်ကတည်း က သွားစောင့် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညနေ ပိုင်းမှာတော့ မြစ်ကြီးနား ၊ ထားဝယ် ၊ လားရှိုး တို့မှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင် တွေကနေ ဖမ်းဆီးခံ ပြည်သူတစ်ချို့ လွတ်မြောက် လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
လွတ်မြောက် လာမယ့် ပြည်သူတွေထဲမှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထား ရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင် လာမယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အားလုံးက စောင့်စားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှု ကွန်ယက်စာမျက်နှာ တွေထက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန် လွတ်မြောက်လာပြီ ဆိုပြီး သတင်း အမှားတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုင်တံခွန် ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြန်ဖြေရှင်းထားတာလ ည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပိုင်တံခွန် ရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦး က “အပိုင်ကြီးကို ရေးတင် နေကြတာ မျက်စိ နဲ့ တပ်အပ် မြင်ခဲ့ကြလို့လား? မိသားစု ထက်တောင် ပိုသိနေကြတာ နော် စိတ်တိုနေရတဲ့အထဲ..ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ အာမချောင်ကြပါနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်” ဆိုပြီး သတင်းအမှားတွေ မဖြန့်ကြဖို့ ပြောထား တာ ဖြစ်ပါတယ် ။အစ်မဖြစ်သူရဲ့ရေးသားပြောပြချက်အရ သရုပ်ဆောင် ပိုင်တံခွန်က အခုချိန်အထိ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခြင်း မရှိ သေးတာကြောင့် မိသား စုဝင်တွေက ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း ပိုင်တံခွန်အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်စေ ဖို့အတွက် ဆုတောင်းနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီများရှင် မင်းသားချောကြီး ဦးညွန့်ဝင်း ယနေ့ ကွယ်လွန်…..